Qareenada Soomaaliya iyo Kenya oo bilaabay jeedinta dacwadohooda Muranka badda. – Radio Daljir
Qareenada Soomaaliya iyo Kenya oo bilaabay jeedinta dacwadohooda Muranka badda.
Seteembar 19, 2016 4:05 b 0
Hague, Sep 19 2016-Magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxaa maanta ka bilaabatay dhegeysiga dacwadda muranka badda ee u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, oo ahayd mid mudooyinkii ugu dambeeyey sooojiitamaysay.
Muuqaallo laga soo qaaday Maxkamada ICJ ayaa muujinaya Qaar ka mid ah Qareenada Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya u kala doodaya oo jeedinaya khudbado kala duwan iyo sidoo kale Ma’suuliyiin ka kala tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo goobta ka hadlaaya.
Maxkamada ayaa socon doonta 2 Maalmood oo labada dal ay soo jeedinaya dacwadaha badda ee ay isku haystaan, waxaana Soomaaliya ay sheegtay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin in hal taako oo ka mid ah badda Soomaaliya ay qaadato dowladda Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dooneysa in xaga sharciga ay ku kala baxaan dhigeeda Kenya oo iyana dooneysa in wada xaajood lagu dhameeyo khilaafka dhinaca badda ee ka dhaxeeya labada Dal.
Dhagayso: Odoyaasha Dangoronyo oo dowladda ugu baaqay in aan la dadajin doorashada golaha deegaanka oo birri la filayo